मध्य–ट्रान्सफर आजबाट, के सन्दीप अर्को टिममा जालान् ? - DURBAR TIMES
HomeSportsमध्य–ट्रान्सफर आजबाट, के सन्दीप अर्को टिममा जालान् ?
एजेन्सी । विश्व चर्चित टी–ट्वान्टी फ्रेन्चाइज प्रतियोगिता इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) को झण्डै आधा खेल सकिएका छन् । लिगको मध्य खेल सकिएपछि एक टिमले अर्को टिमका खेलाडी ट्रान्सफर गर्न पाउने छन् ।
आधा खेल अर्थात सबै टिमले कम्तीमा ७ खेल खेलेपछि लिगमा एक टिमबाट अर्को टिममा खेलाडी ट्रान्सफर गर्न पाउने भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई)को प्रावधानमा उल्लेख छ । लिगको नियम अनुसार ७ खेल खेलेपछि टिमले अर्को टिमका खेलाडी साट्न पाउने छन् । जसमा ट्रान्सफर हुने खेलाडीले भने सो संस्करणमा २ भन्दा कम खेल खेलेको हुनुपर्ने छ ।
सोमबार (आज) हुने रोयल च्यालेंजर्स बैंगलोर र कोलकत्ता नाइट राइडर्सबीचको खेल लगत्तै सबै टिमको ७ खेल पुरा हुँदै छ । खेल लगत्तै लिगको मध्य ट्रान्सफर सुरु हुने छ ।
बीसीसीआईले सन् २०११ मा मध्य सिजन खेलाडी ट्रान्सफर गर्न पाउने बताएपछि फ्रेन्चाइज टिमले मध्य सिजनमा कमजोरी देखिएको क्षेत्रमा खेलाडी साट्ने गरेका छन् । कोरोना माहामारीको कारण युएईमा जारी १३ संस्करणको आईपीएलमा थुप्रै स्टार खेलाडी बेन्चमा सिमित छन् ।
किङ्स इलेभन पञ्जाबका क्रिस गेल, मुजीब उर रहमान तथा चेन्नाई सुपर किङ्सका इमरान ताहिर, जोस हेजलउड तथा मुम्बईका मिचेल मेकक्लेनाघन, क्रिस लिन तथा रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोरका डेल स्टेन, क्रिस मोरिस तथा सनराइजर्स हैदराबादका मोहमद नाबी तथा दिल्ली क्यापिटल्सका सन्दीप लामिछाने जस्ता स्टार खेलाडी ट्रान्सफरका लागि योग्य छन् । स्टार खेलाडीले मध्य लिग सकिन लाग्दा समेत २ खेल खेल्न पाएका छैनन् भने कतिपय बेन्चमा सिमित छन् ।
जारी आईपीएलमा कतिपय टिममा मुख्य खेलाडी समेत अनुपस्थित रहेका छन् । कोही कोरोना माहामारीको कारण प्रभावित भएका छन् भने कोही व्यक्तिगत कारण ।
चेन्नई एक उदाहरण हो ।
त्यसैले मध्य सिजनमा थुप्रै खेलाडी ट्रान्सफर हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । कुनै टिममा स्टार खेलाडी बेन्चमा सिमित हुँदा कुनै टिममा खेलाडी अभाव छ ।
यस संस्करणमा खेलहरु निकै अप्रत्यासित देखिएका छन् । सिमित खेल मैदान, क्रिकेट प्रोटोकल, खेलाडी अभाव, सानो मैदानका कारण विश्लेषकलाई समेत खेलको अनुमान लगाउन कठिन रहँदै आएको छ ।
हालसम्मको अंक तालिकाको हेर्दा कमजोर मानिएका केही टिमले शीर्ष स्थान ओगटेका छन् भने बलियो मानिएका टिम पुछारमा छन् । त्यसैले यस ट्रान्सफर निकै रोमाञ्चक हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नेपालका ग्लोबल आइकन सन्दीप लामिछाने यस सिजन कुनै खेल खेलका छैन् । उनको टिम दिल्लीले समेत लिगको ७ खेल पुरा गरिसकेको छ । दिल्लीले ७ खेलमा ५ जित सहित १० अंक जोड्दा तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ ।
समान अंक पाएको साबिकको विजेता मुम्बई नेट रन रेटको आधारमा शीर्ष स्थानमा छ ।
दिल्लीमा अनुभबी स्पिनरको कमी नभएको कारण लयमा रहेपनि सन्दीपले मौका पाएका छैनन् । दिल्लीमा रविचन्दन आश्विन, अमित मिश्रा, अक्षर पटेल जस्ता दिग्गज स्पिनरको कारण सन्दीप हालसम्म बेन्चमै सिमित छन् ।
लिगको सुरुवातमा आश्विन चोटको कारण खेल गुमाउँदा समेत सन्दीपले मौका पाएका थिएनन् । आश्विन मैदान फर्किएपछि अर्का स्पिनर अमितले समेत चोट बोके ।
पटक पटक स्पिनरले चोट बोक्दा समेत सन्दीपले कुनै मौका नपाउनुमा क्रिकेट विश्लेषक समेत छक्क परेका छन् ।
ट्रान्सफर गर्न पाउने नियम :
१) फ्रेन्चाइज टिमले अर्को टिमको खेलाडी अनुबन्धन सिजनको मध्यबाट गर्न पाउनेछन्
२) ट्रान्सफर हुने खेलाडीले २ भन्दा धेरै खेल खेलेको हुनु हुँदैन
३) ट्रान्सफर हुन सबै टिमले ७ खेल खेलेको हुनुपर्छ
Previous articleपछिल्लो २४ घण्टामा ४ हजार ४७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि , उपत्यकामा २२ सय ८३
Next articleआजकाे मुख्य खबर | २०७७-०६-२६ | Head News | Durbar Times